တဏှာရူး ဘောမ မိုးဟိနျးဘာကောငျလဲဆိုတာ ပနျဆယျလို ဖျောပွီ – Cele Lover
ဒီနတေ့ော့မိုးဟိနျးဆိုတဲ့ စဈအောကျဆှဲ သူတောငျးစားကို စီးရီးလိုကျ ဆှဲမှာ။ အရငျဆုံး ဒီကောငျ့ရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားကို ပွောပွမယျ။
ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ မနကေ့ ပှဲမှာ သူဝနျခံသှားသလို ကိုယျက သူCEO လုပျတဲ့ သူရိယနဝေနျး(အရငျသူရိယအလငျး) ဂြာနယျရဲ့ အယျဒီတာ အဖှဲ့ဝငျဖွဈခဲ့ဖူးလို့ပဲ။ အဲ့အခြိနျက ကိုယျ့အသကျ၂၂နှဈဝနျးကငျြပေါ့
တဏှာရူး ဘောမ မိုးဟိနျး ၂၀၁၀ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရတကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ၈၈အရေးအခငျးမှာ ပွညျပထှကျပွေးခဲ့ရတဲ့ မွနျမာတှကေို ပွနျဖိတျချေါခဲ့တယျ။ မိုးဟိနျးဟာ အဲ့ဒီ့အခြိနျမှာ မွနျမာပွညျ ပွနျလာခဲ့တယျ။
သူက ၈၈ မြိုးဆကျ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျပါဆိုပွီး လူပိုသိအောငျ ဦးကိုကိုကွီးတို့ဆီ အတငျးသှားတှေ့၊ ရုံးကို အတငျးချေါ။ အဲ့တုနျးက ကကြေု မကျြနှာက သိပျမကွညျမလငျ အဖကျမတနျသလိုပုံစံဖွဈနတောကို ကိုယျက ဘျောဒါခငျြး အဲ့လိုဆကျဆံစရာလားလို့တောငျ တှေးမိသေးတယျ။ ဘယျဟုတျမလဲ… ဟိုက အကွောငျးသိတာကိုး။
မိုးဟိနျးအနနေဲ့ ကိုယျနဲ့အလုပျအတူတူ လုပျခဲ့ဖူးတာ ကံဆိုးမှုပဲလို့ ပွောလို့ရတယျ။ ပိုကံဆိုးတာက သူက ကိုယျ့ကို အသကျ၂၂နှဈသာသာ ငခြှတျလေးလို့ သဘောထားပွီး လြှော့တှကျခဲ့တာပဲ။ ဖျောစရာလိုလာတော့ ဖျောရတာပေါ့။
အဲ့အခြိနျ သူရိယအလငျးဂြာနယျဆိုပွီး လုပျဖို့ ရုံးခနျးငှါး၊ ဝနျထမျးခနျ့ပွီး မိုးဟိနျးက မွနျမာပွညျရဲ့ ခရိုနီသူဌေးတှဆေီ ပတျပွီး Proposal တငျတယျ။ သူတို့ဆီက ငှကွေေးယူပွီး လကျကိုငျတုတျ မီဒီယာအဖွဈ ငှပေေးထားသူ မကနြေပျတဲ့ ပွိုငျဘကျဖွဈတဲ့ ခရိုနီကို အပုတျခဖြို့။ Proposal မှာ အဲ့ခတျေက သိနျးတဈထောငျနဲ့ တငျခဲ့တာ။
ထိပျတနျးဘဏျတဈခုရဲ့ ဥက်ကဌကွီးဆီ Proposal ကိုငျပွီး ခွသေလုံးသှားဖကျ ပိုကျဆံသှားတောငျးတဲ့အခြိနျမှာ ဟော့ဒီ့အသကျ၂၀ကြျော ငခြှတျမလေးကို Secretary ယောငျယောငျဘာယောငျယောငျအထာခြိုးပွီး ချေါသှားခဲ့တာလေ။ အဟငျး…. အဲ့Proposal စာရှကျတှကေို အိုငျက မမွငျခဲ့ဘူး ထငျခဲ့လို့လား။
ပိုကျဆံပေးခဲ့တဲ့ ခရိုနီသူဌေးကွီးနာမညျကတော့ လိုအပျမှ ထပျဖျောမယျ။ ဘာလို့ ပိုကျဆံပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ ခရိုနီတဇေကို တိုကျခိုကျဖို့။ ခရိုနီခငျြး ခှကျစောငျးခုတျရာမှာ လကျကိုငျတုတျအဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ရောငျးစားခဲ့တဲ့ ဂြာနယျ။ ဂြာနယျထှကျစမှာ တဇေပုံတှေ မကျြနှာဖုံးတငျပွီး တောကျလြှောကျတိုကျခိုကျခဲ့တာ အမှနျတရားကို မွတျနိုးလို့ မဟုတျဘဲ ပိုကျဆံရလို့။
နောကျပိုငျးဂြာနယျမှာ ရှယျယာအဖွဈ ပါဝငျလာသူတှကေ အဲ့ခတျေစဈအစိုးရဝနျကွီး ဝငျးမွငျ့ရဲ့သား ဇယြောရှမွေဘေောလုံးအသငျးပိုငျရှငျ သူရိနျဝငျးမွငျ့။ ပွီးတော့ လကျရှိ Curvy ပိုငျရှငျမတျမတျရဲ့ ယောကျြား ဒေါကျတာသဈမငျးဆှေ။
ဘဘရှရေဲ့ မွေးတျောလေး မြောကျလောငျးကို ခွရောခငျြးတိုငျးခငျြတဲ့ ဝနျကွီးသား အလိုကြ မြောကျလောငျးကို မကျြနှာဖုံးတငျ ဆျောကွရကာနေ မြောကျလောငျးက ဝနျကွီးသားကို ချေါကွိမျး၊ ဝနျကွီးသားက ကြှတျကြဲပွီး မနကျဖွနျထှကျမယျ့ ဂြာနယျကို မထုတျနဲ့ အမိနျ့ပေးရာကနေ ပှဲထဖွဈ။
ဝနျကွီးသားက တငျးပွီး သူရှယျယာပါတဲ့ ဂြာနယျတိုကျကို ဝငျသိမျး။ ဒါကို ဖိုးလပွညျ့က ဂြာနယျတိုကျကို ဝငျသိမျးပါတယျလို့ ပွညျသူကို ငိုပွရာကနေ ဂြာနယျက ပေါကျသှားတာ။
တဏှာရူး ဘောမ မိုးဟိန်းဘာကောင်လဲဆိုတာ ပန်ဆယ်လို ဖော်ပြီ
ဒီနေ့တော့မိုးဟိန်းဆိုတဲ့ စစ်အောက်ဆွဲ သူတောင်းစားကို စီးရီးလိုက် ဆွဲမှာ။ အရင်ဆုံး ဒီကောင့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြောပြမယ်။
ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ မနေ့က ပွဲမှာ သူဝန်ခံသွားသလို ကိုယ်က သူCEO လုပ်တဲ့ သူရိယနေဝန်း(အရင်သူရိယအလင်း) ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ပဲ။ အဲ့အချိန်က ကိုယ့်အသက်၂၂နှစ်ဝန်းကျင်ပေါ့
တဏှာရူး ဘောမ မိုးဟိန်း ၂၀၁၀ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာ ၈၈အရေးအခင်းမှာ ပြည်ပထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာတွေကို ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ မိုးဟိန်းဟာ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည် ပြန်လာခဲ့တယ်။
သူက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပါဆိုပြီး လူပိုသိအောင် ဦးကိုကိုကြီးတို့ဆီ အတင်းသွားတွေ့၊ ရုံးကို အတင်းခေါ်။ အဲ့တုန်းက ကေကျု မျက်နှာက သိပ်မကြည်မလင် အဖက်မတန်သလိုပုံစံဖြစ်နေတာကို ကိုယ်က ဘော်ဒါချင်း အဲ့လိုဆက်ဆံစရာလားလို့တောင် တွေးမိသေးတယ်။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ… ဟိုက အကြောင်းသိတာကိုး။
မိုးဟိန်းအနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့အလုပ်အတူတူ လုပ်ခဲ့ဖူးတာ ကံဆိုးမှုပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပိုကံဆိုးတာက သူက ကိုယ့်ကို အသက်၂၂နှစ်သာသာ ငချွတ်လေးလို့ သဘောထားပြီး လျှော့တွက်ခဲ့တာပဲ။ ဖော်စရာလိုလာတော့ ဖော်ရတာပေါ့။
အဲ့အချိန် သူရိယအလင်းဂျာနယ်ဆိုပြီး လုပ်ဖို့ ရုံးခန်းငှါး၊ ဝန်ထမ်းခန့်ပြီး မိုးဟိန်းက မြန်မာပြည်ရဲ့ ခရိုနီသူဌေးတွေဆီ ပတ်ပြီး Proposal တင်တယ်။ သူတို့ဆီက ငွေကြေးယူပြီး လက်ကိုင်တုတ် မီဒီယာအဖြစ် ငွေပေးထားသူ မကျေနပ်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ခရိုနီကို အပုတ်ချဖို့။ Proposal မှာ အဲ့ခေတ်က သိန်းတစ်ထောင်နဲ့ တင်ခဲ့တာ။
ထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌကြီးဆီ Proposal ကိုင်ပြီး ခြေသလုံးသွားဖက် ပိုက်ဆံသွားတောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဟော့ဒီ့အသက်၂၀ကျော် ငချွတ်မလေးကို Secretary ယောင်ယောင်ဘာယောင်ယောင်အထာချိုးပြီး ခေါ်သွားခဲ့တာလေ။ အဟင်း…. အဲ့Proposal စာရွက်တွေကို အိုင်က မမြင်ခဲ့ဘူး ထင်ခဲ့လို့လား။
ပိုက်ဆံပေးခဲ့တဲ့ ခရိုနီသူဌေးကြီးနာမည်ကတော့ လိုအပ်မှ ထပ်ဖော်မယ်။ ဘာလို့ ပိုက်ဆံပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ ခရိုနီတေဇကို တိုက်ခိုက်ဖို့။ ခရိုနီချင်း ခွက်စောင်းခုတ်ရာမှာ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရောင်းစားခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်။ ဂျာနယ်ထွက်စမှာ တေဇပုံတွေ မျက်နှာဖုံးတင်ပြီး တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးလို့ မဟုတ်ဘဲ ပိုက်ဆံရလို့။
နောက်ပိုင်းဂျာနယ်မှာ ရှယ်ယာအဖြစ် ပါဝင်လာသူတွေက အဲ့ခေတ်စစ်အစိုးရဝန်ကြီး ဝင်းမြင့်ရဲ့သား ဇေယျာရွှေမြေဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် သူရိန်ဝင်းမြင့်။ ပြီးတော့ လက်ရှိ Curvy ပိုင်ရှင်မတ်မတ်ရဲ့ ယောက်ျား ဒေါက်တာသစ်မင်းဆွေ။
ဘဘရွှေရဲ့ မြေးတော်လေး မျောက်လောင်းကို ခြေရာချင်းတိုင်းချင်တဲ့ ဝန်ကြီးသား အလိုကျ မျောက်လောင်းကို မျက်နှာဖုံးတင် ဆော်ကြရကာနေ မျောက်လောင်းက ဝန်ကြီးသားကို ခေါ်ကြိမ်း၊ ဝန်ကြီးသားက ကျွတ်ကျဲပြီး မနက်ဖြန်ထွက်မယ့် ဂျာနယ်ကို မထုတ်နဲ့ အမိန့်ပေးရာကနေ ပွဲထဖြစ်။
ဝန်ကြီးသားက တင်းပြီး သူရှယ်ယာပါတဲ့ ဂျာနယ်တိုက်ကို ဝင်သိမ်း။ ဒါကို ဖိုးလပြည့်က ဂျာနယ်တိုက်ကို ဝင်သိမ်းပါတယ်လို့ ပြည်သူကို ငိုပြရာကနေ ဂျာနယ်က ပေါက်သွားတာ။
Previous Article မလုပျနိုငျရငျ ၊ မလုပျတတျရငျလညျး ပွညျသူ့အစိုးရကို အာဏာပွနျပေးပွီး ဆငျးလိုကျ
Next Article ဒကာရမှေနျရဲ့ အကွောငျး တှေ ကို ပွောပွရငျး ရကျလညျနလေ့ေးမှာ အလှူအ တနျး ပွုလုပျပေးခဲ့တဲ့ ဦးဇငျးတဈပါး